Mgbasa nke Croton site na mkpuru ahihia na akwukwo, otu esi ebipu elu na ntughari - Osisi - 2020
Croton - ozuzu n’ụlọ
Osisi na-achakarị acha nwere ike ịbụ n'ụdị ohia ma ọ bụ osisi. Ha hụrụ croton n'anya, ma ọ bụ codium, maka akwụkwọ na-egbuke egbuke na paịlị nke agba - site na odo ruo utu-burgundy. Akwụkwọ ya nwere ọdịdị na-adọrọ mmasị, okirikiri ma na-egbu maramara, nke nwere veins na-egbuke egbuke nke yiri foto na mpempe akwụkwọ.
Croton: ozuzu n’ụlọ
N’ulo, imeghari ahihia a na - eme ka agwaetiti ndi a ma ama ma ndi n’eto ahihia. Udiri aha osisi a buru ihe ojoo. Fulawa chọrọ ịma ihe croton hụrụ n'anya na-enweghị mmasị, etu o si agbasa, etu esi egbue ya, kedu ala achọrọ, nke mere na o tozuru oke. Osisi ahụ chọrọ ọtụtụ nlebara anya:
n’enyechaghị ya ìhè, ọ ga-atụfu ụcha mara mma nke akwụkwọ ya;
na anwụ na-acha, ahịhịa na-enwu ọkụ;
ihe eji eme ya na mgbanwe onodu ojoo ya mere ka odida ahihia;
ala ekwesịghị nkụ n’ime ite, ma ọ dị mkpa iru mmiri dị 60%.
Ohia a ewerela oge mgbụsị akwụkwọ
Mkpụrụ ọka dị nro na-agbasa n'ọtụtụ ụzọ, ọ chọrọ ndidi, ebe ọ bụ na ifuru a n'onwe ya anaghị eto ngwa ngwa. Enwere ike ịgbanye exotica a site na mkpuru osisi, mkpuru ahihia, akwukwo, n'ígwé ikuku.
Otu esi agha mkpụrụ osisi croton
Enwere ike ịzụta mkpụrụ osisi Croton na ụlọ ahịa ifuru, ma ọ bụ ịnwere ike ịnakọta ha n'onwe gị. Site na ahụmịhe nke ndị na-azụ ụmụ, iji chịkọta mkpụrụ nke ubi mkpụrụ osisi, ị ga-enwe osisi abụọ nke nwoke na nwanyị ma na-eme ka ọ na-eto. Osisi na-enweghị ụdị aghụghọ ndị a enweghị germination dị mma, n'ihi na usoro a anaghị aga nke ọma.
Mkpụrụ nwetara n'ụlọ na-ejigide ihe ha niile n'ime afọ. Ma, ọ ka mma tọ ha ozugbo ripening. Tupu ịgha mkpụrụ, ọ dị mkpa iji mepụta ọgwụgwọ megide fungi na ọrịa, dịka ọmụmaatụ, epin. Ọ na - echekwa mkpụrụ ahụ site na ụmụ ahụhụ na ọrịa, ma na - akpasu uto. Sook maka awa abụọ, wee banye n’ala.
Dọnye ala n'ígwé - ụrọ gbasaa, mgbe ahụ, ụwa (ị nwere ike peat), yana n'elu ájá. Wụsa mkpụrụ nke dị n’elu ájá ma tinye ebe dị ọkụ. Excgbara nanị n'ụzọ pallet. Okpukpo oku kwesiri ibu site n’okpuru, n’elu, kpuchie ite n’ite ma obu iko, ma dochie ubochi nile.
Dị Mkpa! Ogwe osisi na osisi dị mkpa ka ị ghara ikpughere mgbanwe mgbanwe okpomọkụ na draịva.
Mgbe nke mbụ nke ome gasịrị, ekwesịrị iji nwayọọ nwayọọ mụbaa ka ikuku ahụ wee wee bụrụ nke a na-akọ na ọnọdụ nke uto.
N'ime ụbọchị ole na ole, ọ ga-ekwe omume inyocha mkpụrụ nke germination, ka ha na-eteta ma malite imeghe. Akwụkwọ nke mbụ ga-apụta naanị otu ọnwa ka emesịrị, mgbe akwukwo nke ato ị nwere ike ịkụnye mkpụrụ osisi ahụ na akụwa iche. Hà nke cuttings 10 cm ga-adị tupu mgbe ọnwa 4 gasịrị.
Croton na-eto nwayọ ma ugbua site na ụbọchị mbụ nke ọmụmụ nke ndụ na mkpụrụ chọrọ nlebara anya kwa ụbọchị
Ọ bụrụ na ị kwụsịrị ahịhịa croton na azuokokoosisi ma gbanye ya na mmiri ma ọ bụ ala, ọ ga-agbanye mkpọrọgwụ. Mana nke a ga - akwụsị usoro ọmụmụ. A gaghị ewepụta egbe ọhụrụ, ebe nke a chọrọ akụrụ.
Ya mere, iji mepụta ahihia a, odi obere akụkụ nke oge ịse na akụrụ, site na ebe ndụ ọhụrụ ga-eto. Nanị ihe dị iche site na mpempe akwụkwọ dị mfe bụ na ụdị mpempe maka imepụta ahụ ekwesịghị ịbụ ọnụ nke oge ịse ahụ. Iji usoro a, enwere ike inweta ọtụtụ osisi site na otu cuttings.
Ọ dị oke mkpa ịhapụ otu akwukwo na ifuru na azuokokoosisi ịkpụ, oke nke azuokokoosisi ahụ dị ihe dị ka cm 4-5 hichaa ihe ọ juiceụ juiceụ ahụ kwụpụtara n'akụkụ abụọ ma kwe ka azuokokoosịa ya kpọọ nkụ ruo awa abụọ. Tinye n'ime mmiri ọkụ, na-edebe ọnọdụ okpomọkụ ruo mgbe mgbọrọgwụ ya pụtara na ogo 25. Ọ bụrụ n ’ọnọdụ ikuku na-agbanwe, mkpọrọgwụ ya agaghị apụta.
Seedlingsgha mkpụrụ dị mkpa mgbe mgbọrọgwụ toro na mmiri site na 3-5 cm.
Esi etinyere ahiri ahihia na ulo n’ime ahihia
Mpekere enweelarị steepụ, n’adịghị ka ịgbasa akwụkwọ, ebe ịchọrọ ichere maka edemede nke akụrụ. Mgbakwunye anaghị apụta ngwa ngwa, mana osisi ahụ ga-esi ike ma sie ike karị.
Ọ dị mkpa ka ebipụ n'elu azuokokoosisi 10-12 cm ogologo
Nzọụkwụ-nzọụkwụ nke mkpuru maka akuku:
A ga-egbutu mma ahụ n’otu ngagharị iji otu eji eme ihe.
Jiri ozuzu ọkụ mee ka mkpụchapu osisi ahụ nne belata, belata ya ga - eme ka alaka ahụ gbaa.
N’ebe a na-egbutu ya, a na-eji mmiri sachaa ebe a na-adọbi mmiri ma jiri ya ọkụ.
Ruo awa abụọ, azuokokoosisi kwesịrị ịdị na ikuku mgbe ịchachara.
Anyị na-ewepụ akwụkwọ nke obere, ma gbuchapụ nke dị elu site na ọkara, nke mere na enweghị ike mmefu na mpempe akwụkwọ ndị a.
Anyị na-etinye aka ahụ na iko mmiri ma dozie mmiri mmiri na ogo 25-27.
Ọ dị mkpa ịmata! Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ mgbe amụpụtara nke mkpụrụ akụ na - ada n'okpuru ogo 25 - ihe na - akụ mkpọrọgwụ na - akwụsị, ọ bụrụ na ọ rute na 30 - ọrịa na ero na-etolite.
Enwere ike ịgbanye mkpọrọgwụ ozugbo na ngwakọta ájá na peat na nha anya. Etu a ga - esi gbanye mkpọrọgwụ croton ka o kwere omume maka ya - na ngwugwu. Uzo ahihia a mere ga eme ka ito uto ma mekwa ka iru mmiri di nkpa. A ga-etinye ifuru ya na ite ahụ n'ime akpa nwere oghere maka ikuku dị mma.
Dị Mkpa! Nrube isi na usoro ikpo ọkụ bụ otu n’ime ọnọdụ dị mkpa maka mmepe ihe ịga nke ọma nke osisi ga-aga n’ihu.
Ctionmịpụta nke croton n’ụlọ site n’enyemaka nke ikuku ikuku bụ nke kachasị arụ ọrụ. Usoro dị otú a nwere ike iyi ihe gbagwojuru anya na anya mbụ. N’ezie, nke a bụ ụzọ ngwa ngwa iji nweta ahịhịa dị ike ma sie ike, ebe ọ bụ na ike niile iji zụlite mgbọrọgwụ sitere na ifuru nne. Mgbe etolitechara mgbọrọgwụ zuru oke, ifuru ahụ na-enyefe nkewa site na nne nne ma na-aga n'ihu na-eto eto.
Maka ịkwanye mkpọrọgwụ site na ikuku, a na-ahọrọ ụzọ mgbapụ, nke nwetalarị ogbugbo siri ike. Ekwesịrị iji mma dị nkọ ghee ebe dị sentimita abụọ n'ogologo, mana na-emerụghị etiti ọcha ahụ.
Jiri akwa uto mee ka oghere dị mkpụmkpụ, jiri akwa ajị anụ na-eme sphagnum ma jiri akpa ma ọ bụ ihe nkiri dozie ikuku a. A ga-edozi elu nke ngwugwu ahụ na enwere ike ịnwe mmiri ọzọ n'oge uto.
Mgbatị ga-esi n’oghere ndị dị na ya pụta otu ọnwa, ma ọ dị mkpa ka ị chere maka uto ha kpụ ọkụ n'ọnụ nke mere na ihe ọkụkụ ahụ kwachara ya mma nwere ike ịga n'ihu na-eto
Azọ kachasị mma bụ itinye iko ma ọ bụ karama plastik na ekpughere nke gbọmgbọm ahụ, jiri teepu ma ọ bụ ihe nkiri na-edozi ya. Ha mejuo iko ndị ahụ na peat ma na-eche ka mgbọrọgwụ pụta.
Ọzọkwa, enwere ike ịnweta ikuku nke ikuku site na igwu ala akụkụ nke ogwe dị n'ala. Iji mee nke a, belata oge ịse ahụ ma dozie ya n'ite na ite dị iche.
Ntughari nwata na oche nwata
Mgbe ịchichara croton na ụlọ ahịa, ọ dị mkpa iji ya gbanye ya ngwa ngwa o kwere mee. A na-atụgharị ihe ọkụkụ okenye n’otu oge na afọ 2-3 ọ bụla. Osisi na-eto eto chọrọ mgbanwe nke ala kwa afọ. Mpempe akwụkwọ na ọdịdị nke mgbọrọgwụ ruo 5 cm n'ogologo chọrọ gbanye ala na-eme nri.
Croton - nlekọta ụlọ na otu esi agba mmiri a
Ala nke croton kwesiri ịtọghe na ọkụ, ebe osisi na-enweghị mmiri, mana ọ gaghị anabata nnagide mmiri na ala. Mustwa ga-enwerịrị ihe oriri. Enwere ike ịnweta ezigbo ngwakọta site na ịgwakọta akụkụ akụkụ hà:
Mkpụrụ okirikiri zuru ụwa ọnụ dabara adaba, nke ịchọrọ itinye atọ n'ime ájá. Tupu ojiji, a ga-agwọ ya na potassium permanganate ma nke a mịrị amị.
Dị Mkpa! Maka mmepe nke ifuru ahụike n’oge ịmịnye ya, ọ dị mkpa ka ị gbanwee akwa mmiri ahụ, mee nke ọhụrụ ọbụlagodi 2 cm.
Croton na-ezo aka na osisi ndị ahụ nọ na nnukwu ite nke ihe ọkụkụ gbakọtara ruo mgbe ha kpochara akụkụ ya niile. Yabụ, ite ahụ kwesịrị ịdị obere, agbanyeghị ihe ijuanya ọ nwere ike ile anya etu o si eto na-eto na ya.
Ogo nke ite ahụ kwesịrị ịnwe mgbọrọgwụ niile nke ifuru + 1 cm nke ohere n'efu maka ala.
Obere ite na ite plastik dabara adaba. Ọ dị mkpa na enwere olulu mmiri, mmiri ịdọrọ mmiri bụ ihe na-akpata ọnwụ.
Ọ dị mkpa ịmata! Emeghari ahihia nke okenye ka emechara nke ọma na Mach site na ntughari.
Mgbe ịmịnyechara ya, ọ dị mkpa itinye ite ahụ n’ebe a na-ekpo ọkụ, na-enwe iru mmiri na ọnọdụ ịgbara mmiri.
Mgbanye croton siri ike nyefe, yabụ n'oge a ịchọrọ inye ya ọnọdụ kachasị mma
Maka ajụjụ banyere otu esi ebesa onye ọrịa ọrịa ọrịa, azịza ya doro anya. A na-adụ ndị hụrụ ifuru ahụ n'anya nwere ndụmọdụ ka ha gwọọ ya, ma jirizie ya dochie ya.
Etu esi ebipu croton ka o ghazie
Syngonium - nlekọta ụlọ na omumu
Nwoke mara mma na-etolite n’ụdị ohia ma ọ bụ osisi, ka oge na-aga, n’elu alaka ya, akwụkwọ ya ochie na-ata ma daa, Ome ndị ahụ na-agbatị ma tufuo ihe ịchọ mma ya. Ifuru ahụ n’onwe ya anaghị eto nke ukwuu na ọtụtụ afọ. Emebechaa, nke mbụ, iji mee ka e too uto, nweta ụdị ọhụụ dị n'ọhịa, na-emelite ome na ibe.
Iji mee alaka ụlọ ọrụ codium, ị kwesịrị ị belata ome niile
Ozo nke okpueze zuru oke na osisi a kwesiri ka eme ya n’usoro:
mgbe afọ 1.5, tuo osisi iji teta ụdọ etiti ma mepụta ome ọhụrụ;
mgbe afọ abụọ, a na-eme obere ịkpụcha akụkụ, na-ahazi uto nke ome ọhụrụ - idozi uto nke ome ga-enyere aka ịmepụta okpueze mara mma ma chọọ;
mgbe ọ dị afọ ise, mkpacha zuru oke na - ewere ọnọdụ: lee ihe e mesiri ike abụghị ntinye okpueze, kama na - akpali mkpalite, ebe ọ bụ na n'oge a, ifuru na - amalite ịkụda usoro.
Ekwesịrị iji ngwaọrụ ejiri aka rụọ ọrụ nke Croton iji rụọ ọrụ n'otu ihe ọ bụla. A ga-eji ebe a na-eme ebe a ga-ete ya gwọọ ya na unyi mgbe mgbe usoro ahụ gasịrị. Mgbe kwachaa, nye udo osisi ahụ, tinye ndò ele mmadụ anya n'ihu, belata mmiri.
Dị Mkpa! Mgbe ịkpụchachara ya, enweghị ike ịgba mkpụrụ osisi ahụ mmiri - ebe ndị nwere ike ịgbaji nwere ike ire ere.
Ilekọta ahịhịa ọ bụla anya n'ụzọ ziri ezi na-ahụ anya mma. Croton ga-eji ekele zaghachi ya na paịlị nke agba agba nke akwụkwọ ya dị ịtụnanya. Ọ dị mkpa iji ịhụnanya gakwuru nlekọta osisi iji mepụta ikpo ọkụ na nkasi obi n'ụlọ.
Akwukwo ulo, nke di ndu - na-etolite ma na-elezi anya n ’ulo, nkpuru ohia
Nkwadebe nke cilantro maka oyi: ihicha, kefriza, salting, nchekwa na marinade
Ihe nzuzo nke na-eto eto Brugmansia n'ọhịa